विवरण: तुर्कमेन होटल3- उच्च होटल, टर्की सबैभन्दा सुन्दर क्षेत्रको एक मा स्थित। यो प्रयासको न्यूनतम संग समुद्र नजिकै आराम गर्न चाहने ती लागि सिद्ध छ। समुद्र देखि यो एक छापिएको सडक र बालुवा को एक सानो पट्टी द्वारा विभाजित छ। यो होटल दुई किलोमिटर दूरी मा Alanya हो जो गाउँ Obagel को एक क्षेत्र ओगटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाट एण्टाल्या को हवाई अड्डा यो एउटा ट्याक्सी को मद्दत वा सहरी बस मा हटाउन सकिन्छ 132 किलोमिटर दूरी, द्वारा विभाजित छ।
तुर्कमेन होटल3भवन 1996 मा निर्माण र एक पाँच तले भवन हुन्छन् थियो। पछिल्लो refurbishment 2012 रूपमा हालै स्थान लियो। एक 3,000 Sq.m. मा Nestled इलाका होटल स्वामित्वको, यसलाई जहाँ तपाईं बाहिर एक पैदल ले सुत्न र रूखहरू र फूल को सौन्दर्य र सुगन्ध रमाइलो गर्न जानुअघि एक भव्य बगैचा छ।
कोठा: तुर्कमेन होटल3कोठा 94 मानक कोठा, तिनीहरूलाई को 50 समुद्र एक दृश्य छ छ। यो कोठा, विशाल उज्ज्वल र नरम रंग मा सजाया छन्। प्रत्येक तत्काल सेरोफेरो को सुन्दर दृश्य भेटी एक बालकनी छ। नुहाउनु संग वातानुकूलित कोठा। निःशुल्क रहन अवधि लागि आवश्यक सबै प्रसाधन। ट्याप गर्नुहोस् पानी नुन को एक सानो राशि छ। त्यहाँ उपग्रह टिभी (1 रूसी च्यानल), हेयर ड्रायर, मिनी-पट्टी (खाली) डेस्कटप छ। फोन छैन। अनुरोध, खाट सेट, फलाम जारी छ। त्यहाँ एक जागा-अप कल रूपमा यस्तो सेवा हो।
पाल्तु जनावर र अनुमति छैन। अशक्त लागि कोठा प्रदान छैन।
शक्ति: यसको अतिथि तुर्कमेन होटल3यस्तो ऐ रूपमा भोजन प्रदान गर्दछ। बफेट जो एक बन्द कोठामा 150 जना अटाउँछन् मुख्य रेस्टुरेन्ट, र छत मा नै सेवा छ। "सबै समावेशी" प्रणाली 23.00 सम्म 10 AM सान्दर्भिक छ। सबै स्थानीय पेय निःशुल्क यस समयमा उपलब्ध छन्। 100 मान्छे - पूल द्वारा स्थित एक पल्ट, जो क्षमता पनि छ।
समुद्र तट: होटल 85 मिटरसम्म फैलिएको जो आफ्नो आसन्न बालुवा र कंकड समुद्र तट, छ। सूर्य बेड, गद्दे र छाते भुक्तानी छन्। समुद्र तट होटल जो एक भूमिगत खण्डमा मार्फत पार गर्न सकिन्छ मोटरबाटो, छुट्याउँछ।
थप जानकारी: सिद्ध छुट्टी लागि Yeni तुर्कमेन होटल3मा 120 वर्ग को एक आउटडोर पूल क्षेत्र। मीटर। वयस्क सेट स्लाइड। लबी बारमा वाइफाइ निःशुल्क छ। को स्वागत मा जहाँ अतिथि आफ्नो बहुमूल्य वस्तुहरू (अतिरिक्त शुल्क) भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ सुरक्षित छ। अनुरोध, घडी डाक्टर सेवाहरू वरिपरि उपलब्ध छन्। त्यहाँ एक धुलाई कोठा छ।
खेलकुद मनोरञ्जन उपलब्ध निःशुल्क सना, टेबल टेनिस, बीच भलिबल अदालत समुद्र तट मा, चेस। एक टर्की स्नान, मालिश, बिलियर्ड्स - भुक्तानि सेवाहरू बीचमा। तपाईं विन्डसर्फिङ जान्नको लागि डाइभिङ केन्द्र भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न पानी खेल (पानी स्किइङ, pedalo, paraseyl, क्यानोइङ) छन्।
बच्चाहरु को लागि त्यहाँ एक मिनी-क्लब, खेल मैदान बाहिर, बाहिरी छोराछोरीको पूल छ।
त्यहाँ3पटक हो एक हप्ता नरम एनिमेसन (अंग्रेजी, जर्मन र रूसी) बित्दै।
टिप्पणी: यस होटल को मुख्य लाभ समुद्र आफ्नो निकटता छ। तर यस प्रसिद्ध तुर्कमेन होटल 3. समीक्षा कि सस्ती रुचि गर्नेहरूलाई आराम गर्न यहाँ आएको संकेत, तर सहज बाँकी। कोठा धेरै ठूलो, तर सफा र सहज छैन। समुद्र तट त्यहाँ मनोरञ्जन को धेरै प्रकार जो कोहीले सम्झना गर्न अनुमति छैन भनेर हो, सफा छ।
टुला मा सबै भन्दा राम्रो होटल: फोटो र समीक्षा
होटल "ग्लोरिया" (टर्की, BELEK): विवरण र समीक्षा
Acacia Palms Resort (भारत / गोवा): होटल समीक्षा
को औंलाहरु र औंलाहरुमा छाला बन्द किन छील?
Schüler - एक धोकेबाजले
कुचो: घर, प्रजनन मा रोपण र हेरविचार
Nordwest - ओन्कोलोजी क्लिनिक जर्मनी
के Marshak SY जीवनकालमा यस्तो लेखे काम गर्दछ?
भव्य सताब्दी - सुल्तान Suleiman को भव्य को शासन